အဆိုတော် ထက်ယံနှင့်အင်တာဗျူး -
♥ ဝါသနာရှင် အဆိုတော် ထက်ယံ နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက် ( အင်တာဗျူး ) အစီအစဉ် ♥ ♥ ♥ www.nayzawlin1.com ♥ အဆိုတော် ထက်ယံ နှင့် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းချက် ( အင်တာဗျူး ) အစီအစဉ် ♥
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ သူ့သီချင်းလေးတွေ တွေ့ဖူးနေတာ ကြာနေပါပြီ။ သူ့ ရဲ့သီချင်း လေးတွေက သီချင်း အေးအေးလေးတွေ တကယ့် ခံစားချက် လေးနဲ့ သီဆိုထား တာလေး တွေ့ရပါတယ်။
သီချင်း အေးအေးလေးတွေ နှစ်သက်ကြသော စာဖတ်သူမိတ်ဆွေများ အတွက် ဝါသနာ အဆိုတော်လေး ထက်ယံ နှင့် တွေ့ဆုံပြီး သူ့အကြောင်းလေး တွေကို ဒီလို မေးမြန်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မေး = နာမည်လေး နဲ့ အသက်ကို သိပါရစေ။
ကျနော့် နာမည်က ထက်ယံ ပါ။ အသက်ကတော့17 ပါ ။ မပြည့် သေးပါဘူး ...
မေး = သီချင်းတွေကို ညီလေးက ဝါသနာပါတယ်နော် ....
ဟုတ်ကဲ့ ... အဲ့ဒါက ကျနော် ငယ်ငယ်လေး ကတည်းကပါ။ အင်း .... မူလတန်း လောက်ကတည်းက သီချင်းဆိုရရင် ပျော်နေတတ်တယ်။
မေး = ဒါဆို ညီ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ညီက တစ်နေ့သီချင်း ဆိုရမယ်လို့ စိတ်ကူး ထားတယ်ပေါ့။
ဟုတ်တယ် ... ကျနော် ငယ်ငယ်ကတည်းက ကြီးလာရင်ဘာလုပ်မလဲလို့ မေမေကမေးရင် အဆိုတော် သရုပ်ဆောင် လုပ်မယ်လို့ ပဲပြောတာတဲ့ ...
မေး = အခုလက်ရှိ ညီလေးရဲ့ ဝါသနာကို ညီရဲ့ မိဘ တွေကရော ဘာပြောလဲ ?
ဟုတ်ကဲ့ ... ကျနော်က ဒါမှ ဒါဖြစ်ချင် နေတော့လည်း အမေတို့က မလွန်ဆန်တော့ပါဘူး ...... အစပိုင်းကတော့ အိမ်မှာ သပိတ်မှောက်ရတာပေါ့။ အင်း ... ထမင်း မစားတာတို့ ဘာတို့ ပေါ့နော်ပြန်တွေးမိရင် ရီရတယ်ဗျာ။ အမေတို့က ကျနော့်ကို စစ်ဆေးဗိုလ်ဖြစ်စေချင်တာလေ သူတို့ သဘောအတိုင်း ကျနော်လည်း ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ကံကောင်း ထောက်မစွာနဲ့ ပဲ အမှတ်နဲ့ ပြုတ်သွားတယ်။ အဲ့ ... ဒါနဲ့ ကျနော့ကို အိမ်က လက်ရှော့လိုက်တာ ....
မေး = ဒါဆို ညီလေးက သီချင်းဆိုဖို့ အတွက် တော်တော်လေး ကြိုးစားခဲ့ရတာပေါ့။
ဟုတ်ကဲ့ ... အဲ့ ... လိုပဲပြောပါတော့။ ဒီလိုပါပဲ ကျနော် ဒီအလုပ်ကို လုပ်မယ်ပြောတော့ ကျနော့ကို ဘယ်သူမှ အားမပေးဘူး။ အထူးသဖြင့် မိဘအသိုင်းအ၀ိုင်း ကပေါ့ ... မန္တလေးကနေပြီးတော့ ရန်ကုန် ဆိုတော့လည်း စိတ်မချတာ လည်းပါတာပေါ့ဗျာ။ ပိုဆိုးတာက ဒီမှာ အမျိုးလိုမရှိဘူးလေ။ ကျနော် တစ်ယောက်တည်း ဆိုတော့လည်း ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကျနော်ကဘယ်ရမလဲ အသဲအသန် သပိတ်မှောက်တာလေ ဆေးရုံ မတင်လိုက်ရတာ ကံကောင်း ....
မေး = အနုပညာကို ငယ်ငယ်လေးကတည်း ဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့ ညီလေး သီချင်းလောက်ပဲ ဆိုဖြစ်မှာလားသရုပ်ဆောင်တို့ ဒါမမဟုတ် တစ်ခြား ဘာတွေ လုပ်ဖြစ်မှာလဲ။ ညီလေးရဲ့ စိတ်ကူးတွေရော ရည်ရွှယ်ထားတာ လေးတွေ ရှိလား ?
ဟုတ်ကဲ့ .... ကျနော် အခုတော့ သီချင်းကိုပဲ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားပြီးသီဆိုမှာပါ။ နောက်ပိုင်း ... နာမည် ရလာရင်တော့ သရုပ်ဆောင် လိုင်းကိုကူးမယ်ပေါ့။ အဲ့လိုတော့ အစီအစဉ်တော့ရှိပါတယ်။ဘယ်လိုပြောမလဲ နှစ်မျိုးလုံးပေါ့နော် ... လုပ်မယ်ပေါ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျနော်က နှစ်မျိုးလုံးလဲ ၀ါသနာပါတယ်လေ။
မေး = အခု ညီလေး အနေနဲ့ သီချင်းတွေကို ဘယ်တုန်းက စပြီး ဆိုဖြစ်တာလဲ ?
ဟုတ် .... ကျနော် ကိုးတန်း နှစ်လောက်ကတည်းက မျှော်လင့်ဆဲ ဆိုတဲ့မ သီချင်းလေးကို စဆိုဖြစ်တာပါ။ အင်း ... ပြီးတော့ ဆယ်တန်း ဖြေပြီးတာနဲ့ ကျနော် ဆက်ဆိုဖြစ်ပါတယ်။
မေး = ညီလေးရဲ့ သီချင်းတွေကို အွန်လိုင်း ( နိုင် ) ဆိုက်တွေမှာ တော်တော် များများ တွေ့ရတယ်နော်။
ဟုတ်တယ် ခင်ဗျာ .... ကျနော်က အွန်လိုင်းမှာပဲဖြန့် ဖြစ်လို့ပါ။
အဲ့ လိုနဲ့ ပဲ ... ကျနော့ ကို လူတွေ စသိလာအောင် လုပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားမိလို့ ပါ။
မေး = Flash Songs တွေ တော်တော်များများ ညီရဲ့ သီချင်းတွေ တွေ့ရသေးတယ်နော် ...ညီ ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီး တင်ဖြစ်တာလား သီချင်းတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး ညီလေးကို ကူညီပေးနေသူရော ရှိလား ။
ဟုတ်ကဲ့ ... ကျနော်က ကိုယ်တိုင် မလုပ်တတ်ပါဘူး။ ကျနော့ကို ကူညီတဲ့ အစ်ကိုတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။သူက ကိုဂျွန်ဖြိုး ပါ။ (fusarshinlay@gmail.com) က အများဆုံး ကူညီပေးတာပေါ့နော် ... ဟုတ်ကဲ့ ....
မေး = အနုပညာ နဲ့ ပက်သက်ပြီး ညီလေး အခု လတ်တလော ဘာတွေ လုပ်ဖြစ်လဲ ?
ကျနော် ခုတစ်လောသီချင်းလေးတွေ လုပ်ဖြစ်ထားပါသေးတယ်။ မဖြန့်ရသေးတာပါ။ ကျနော့ သယ်ရင်းတွေ တောင်းဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့နော်... အမြူးလေးတွေ ပြီးတော့ အခွေထုတ်ဖို့လည်း ကြိုးစားနေပါတယ်။
မေး = ညီလေးရဲ့ ပထမဆုံး သီဆိုဖြစ်တဲ့ သီချင်းနာမည်လေးကို ပြောပြပါဦး ။
ဟုတ်ကဲ့ .... မျှော်လင့်ဆဲ(မ)သီချင်းလေးပါ။
မေး = ပထမဆုံး ကိုယ်ဝါသနာ ပါတဲ့ သီချင်းလေးတွေကို သီဆိုရတယ် ဆိုတော့ ညီလေး ရင်ထဲက ဘယ်လိုခံစားမိလဲ။
ဟုတ်ကဲ့ ... ပျော်လည်းပျော်တယ်။ ပြီးတော့ ပင်ပန်းတယ် ထင်ထားသလောက် မလွယ်ဘူးလေ။ ဆိုကြည့်တဲ့ အခါမှာ အခက်အခဲတွေ အနည်းအများတော့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သီချင်းလေးလည်း ထွက်လာရော သယ်ရင်းတွေက ကောင်းပါတယ် ဆိုတဲ့ အသံလေးကြားရတော့ လည်း ကျွန်တော် ပင်ပန်းတာတွေဟာ အားလုံးပျောက်သွားရော ပင်ပန်းတာတွေမရှိတော့ဘူး ....:)
မေး = မ သီချင်းလေးက နားထောင်ရတာ အေးအေးလေးနဲ့ ကောင်းပါတယ်။ ညီလေး အနေနဲ့ရော မသီချင်းလေးနဲ့ ပက်သက်ပြီး တစ်ခုခု ခံစားချက် ရှိရင် ပြောပြပေးပါလား။
ဟုတ် .... အင်း .... နည်းနည်းတော့ ရှိတယ် ဆိုပါတော့ဗျာ ....
မေး = အခု ညီလေး ဆိုထားတဲ့ သီချင်း အရေအတွက်က ဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲ ?
ဟုတ် .... 10 ပုဒ် ပေါ့နော်။ ဟို .... သင်္ကြန်သီချင်း ပါဆိုရင်တော့ အားလုံးပေါင်း 11ပုဒ်ပါ .....
မေး = သီချင်း နာမည်လေးတွေကို ပြောပြပေးပါလား။
1 . ယုံကြည်ပေးပါ။
2 . ဘယ်သူ့ အတွက်လဲ
3 . Happy Birthday Honey
4 . ကလေးဆိုးလေ
5 . My Lovely Girl
6 . ငါ့အတွက်ရှိပါ
7 . မျှော်လင့်ဆဲ
8 . Baby Girl
9 . အချစ်ရူးလေး
10 . အစွန်းစွန်ထိ
11 . အတူတူခုန်လိုက်(သင်္ကြန်သီချင်း) တို့ပါ။
မေး = သီချင်းလေး တွေ အေးအေး လေးနဲ့ တကယ်ကို ခံစားချက် ပြည့်ဝပါတယ်။ ညီလေး ဘယ်လို ကြိုးစား သီဆို ဖြစ်လဲ ..... ( ဥပမာ လေ့ကျင့်မှုပေါ့ )
ဟုတ်ကဲ့ ... ကျနော်က သီချင်းတစ်ပုဒ်ရေးမယ် ဆိုရင်ပေါ့... ဘယ်လို အကြောင်းအရာ ရေးမလဲစဉ်းစားတယ် ပြီးတော့ ခံစားကြည့်တယ်။ ကုန်ကြမ်း ရှာတယ်ပေါ့နော်။ အဲ့လိုပြီးမှ ရေးတယ်ပြီးတော့ ခံစားချက်သွင်းပြီးတော့ ဆိုပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ တိုက်ဆိုင်တာလေးတွေ ရှိသွားရင် ပိုပြီးတော့ ကောင်းသွားရော ။
မေး = အခုရေးပြီး ဆိုထားတဲ့ သီချင်း ၁၁ ဗုဒ်မှာ ညီလေး အကြိုက်ဆုံး ( ဒါမှ မဟုတ် စိတ်ထဲကျေနပ်မှု အများဆုံး ) သီချင်းလေးကို ပြောပြပေးနိုင်မလား ။
ဟုတ်ကဲ့ ... ကျနော် သေချာပြောရမယ်ဆိုရင် အားလုံးသိပ်အား မရပါဘူး..... ဒါပေမယ့် ... အကြိုက်ဆုံး ကတော့...... ယုံကြည်ပေးပါ။ (BELIEVE ME)ကို ပေါ့နော် ။
မေး = သီချင်း စာသား လေးတွေကိုရော ညီ ကိုယ်တိုင် ရေးတာလား ။
ဟုတ် ... အားလုံးနီးပါးတော့ ကျနော်ရေးတာပါ။ ကလေးဆိုးလေး သီချင်းကတော့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်နဲ့ ပေါင်းရေးဖြစ်တာပါ။ ကျနော့ သူငယ်ချင်း အာကာနဲ့ ပေါ့။တချို့ နှစ်ယောက် ဆိုတာတွေကတော့ သူတစ်ဝက်ကိုယ်တစ်ဝက်ပေါ့။ ကိုယ်ဆိုတာ ကိုယ်ရေးပေါ့နော် ....
မေး = သီချင်းတွေ ဆိုတော့ ညီလေး သူငယ်ချင်းနဲ့ ဘယ်သီချင်းတွေ သီဆိုဖြစ်တာလဲ။
ဟုတ် ... အချစ်ရူးလေး သီချင်းမှာဆို ကျနော့ သူငယ်ချင်း အာကာနဲ့ ပါ။ ပြီးတော့ ဘယ်သူ့အတွက်လဲ။ အဲ့ ... သီချင်းမှာတော့ Ko Little Boy နဲ့ ... အဲ ... သင်္ကြန်သီချင်း (အတူတူခုန်လိုက်) မှာကျတော့ ကိုထက်အောင်လှိုင် နဲ့ ပါ။
မေး = သင်္ကြန်သီချင်း (အတူတူခုန်လိုက်) သီချင်းလေးက မြူးမြူးလေးနဲ့ နားထောင်ရတာ ကောင်းပါတယ်။ ဒီသီချင်းလေးနဲ့ ပက်သက်ပြီး ပြောစရာလေး ရှိလား ... တစ်ခုခု ပေါ့ .....
ဟုတ်... အဲ့ဒါ ကတော့ ကျနော်ဘယ်လိုပြောမလဲ ? အဆင်ပြေအောင် လုပ်လိုက်ရတဲ့ သီချင်းလေးပါ.. အဲဒီနေ့က နေ့လည်လောက်ကြီး ကိုထက်အောင်လှိုင် (DELIGHT) က ဖုန်းဆက်တယ်လေ။ ကျနော့ကို အရေးကြီးတယ်တဲ့။ အဲ့ဒါနဲ့ ဟိုရောက်ရော သင်္ကြန်ဆိုရမှာတဲ့ ... သီချင်းက မရှိဘူး သူကလည်း အဲ့ကျမှ တီးတယ်။ ကျနော်ကလည်း တစ်ခါတည်းရေးလိုက်တယ်2နာရီလောက် ပဲကြာလိုက်တယ် ပြီးသွားရော ဘာပဲပြောပြော တစ်ပုဒ်တော့ရတာပေါ့နော် ... အကြမ်းပေါ့ဗျာ ...
မေး = သီချင်းတွေကို ဘယ် Studio မှာ ဆိုဖြစ်လဲ ...
ဟုတ်ကဲ့ ... ရန်ကင်းက DELIGHT မှာ အများဆုံးသွင်းဖြစ်ပါတယ်။
မေး = အခု သီဆိုပြီးသား သီချင်းတွေကို ညီလေးအနေနဲ့ အခွေ ထုပ်ဖို့ အစီအစဉ် ရှိလား။
ဟုတ်ကဲ့ ... အစီအစဉ်တော့ရှိပါတယ်။ ခုဆိုထားတဲ့ သီချင်းတွေအားလုံးတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ အဲအထဲက လူကြိုက်များတာတွေကို စုပြီးတော့ပေါ့နော် ထုတ်ဖို့ပါ။ ဒါပေမယ့် စောပါသေးတယ်.... ကျနော် ... အချိန်ယူရအုန်းမယ်ဗျာ ...
မေး = ဟုတ်ကဲ့ ... အခု လက်ရှိ ညီလေးအနေနဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက် ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေတယ် ဆိုတော့ ရှေ့ဆက် ညီ ဘာတွေ လုပ်ဆောာင် နေတာလဲ ဆိုတာ စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေများ ကို ပြောပြပေးစေ လိုပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ကျနော်ရှေ ဆက်သီချင်းတွေကို ပိုကောင်းသထက် ကောင်းလာအောင်ကြိုးစားပြီး လုပ်ဆောင်သွားမယ်။ ပြီးတော့ကျနော့ သီချင်းတွေကိုလည်း လူတိုင်နီးပါးခံစားလာနိုင်အောင် လည်းရေးပါ့မယ်...
ကျနော့ကို အားပေးနေတဲ့ ကျနော့ သူငယ်ချင်းတွေက ကျနော့သီချင်းတွေကို ဆက်နားထောင်ပေးပြီးတော့ ဝေဖန်ပေးပါ။ အကြံပေးပါ ကျနော် စောင့်နေပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
မေး = ညီလေးက အနုပညာနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဘယ်လို ခံထားပါသလဲ ?
ဟုတ်ကဲ့ ... ကျနော်ရဲ့ ဝါသနာ ကျနော့ရဲ့ ခံယူချက်အတိုင်း ....ပြီးတော့ ဖေဖေတို့ မေမေတို့ကို ပေးထားတဲ့ ကတိအတိုင်း ကျနော်အစွန်းစွန်ထိ အောင်မြင်မှုတွေရအောင် ပြီးတော့ တစ်နိုင်ငံလုံးက လက်ခံတဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက် ဖြစ်အောင်ထိကြိုးစားသွားမယ်လို့ ကျနော် ခံယူထားပါတယ်။
မေး = အောင်မြင်တဲ့ အဆိုတော် တစ်ယောက် ဖြစ်အောင် ဘယ်လို ကြီုးစားသွားမယ် ဆိုတာစာဖတ်သူ မိတ်ဆွေများကို ပြောပြပေးပါဦး။
ဟုတ်ကဲ့ ... ကျနော်ကတော့ မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ ပေါ့နော်။
ဥပမာ ... ကျနော့် ဖေဖေပြောသလိုပေါ့။
အဲ့ .... လိုမျိုးပဲကျင့်သုံးသွားပါ့မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အနုပညာလောက ကနည်းနည်းတော့ ရှုပ်တယ်လေကံ ညဏ် ၀ီရိယ သုံးခုလုံး ပေါ်လည်း မူတည်နေပါတယ်။ ဘုရားတရားလည်း မမေ့ရ ဘူးပေါ့။
မေး = အခု ညီလေးက သီချင်းတွေကို စပြီး သီဆိုတယ် ဆိုတော့ ညီလေး အခက်အခဲ တွေ ရှိမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်း ကို သိပါရစေ။
ဟုတ် ... ရှိပါတယ်။ ကျနော်က စတူရီယို အတွေ့ အကြုံ မရှိသေးတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့နော် ...မိုက် (Mic) အကြောင်းလည်း နားမလည်ဘူးလေ အဆိုးဆုံး ကတော ကျနော် (မ)သီချင်းသွင်းတုန်းကပါ။ အကြာကြီးသွင်းလိုက်ရတယ်။ ကျနော့ အထင် တစ်ပတ်လောက်ကြာသွားတယ်။ ကျနော် ဘယ်လောက်ထိဖြစ်လဲဆိုတော့ မိုက်မြင်ရင်မောနေပြီ။ နောက်ပိုင်ကျတော့လည်း အတွေ့အကြုံကပဲ သင်ပေးသွားတာပါ။ သူများ ဆိုတာတွေကို နားထောင်တယ်။
လေ့လာတယ် ပြီးတော့ ဆိုကြည့်တယ်။ နောက်ပိုင်းကျတော့လည်း အစကထက်တော့ တဖြည်းဖြည်း ပိုအဆင်ပြေလာပါတယ်။ကျနော့်မှာ ကအနုပညာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ အဆက်အသွယ်က မရှိဘူးလေ။ အဲ့ ကျတော့ တစ်ခါတစ်လေ အားငယ်တယ်။ကိုယ် နယ်လည်းမဟုတ်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပေါ့နော် ပြန်မေးမိတယ်။
ငါဖြစ်နိုင်ပါ့မလားပေါ့။ အမျိုးမျိုးပါပဲ ၊ ဒါပေမယ့် ကျနော် ဇွဲမရှော့ပါဘူးဖြစ်အောင်ကို လုပ်မယ်ပေါ့။ အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲ ဆက်လုပ်နေပါတယ်။ ခုတော့ လမ်းစလေး နည်းနည်း တွေ့နေပါပြီ။
မေး = ကြိုးစားတဲ့ သူတွေအတွက် အောင်မြင်မှု ဆိုတာ ရှိစမြဲပါ။ ညီလေးကရော ဒီကိစ္စနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဘာပြောချင်လဲ ?
ဟုတ်မှာပါ ၊ ကြိုးစားနေတဲ့ လူဆိုတာက အောင်မြင်မှုကို မရမချင်း ကြိုးစားနေမှာလေ အဲ့ဒီတော့ မှန်မယ်လို့ ကျနော်က ထင်ပါတယ်။
မေး = အနုပညာနဲ့ ပက်သက်ပြီး ညီက အဆိုတော် လိုင်းကို ရွှေးချယ်ထားတယ် ဆိုတော့ ညီလေး သီချင်း မဆိုခင်က ညီလေး အားကျတဲ့ အဆိုတော်တွေကို ပြောပြပါလား။
ဟုတ်ကဲ့ ... ကျနော် အားကျတဲ့ အဆိုတော်တွေ ကတော့ အများကြီးပါပဲ။ မြန်မာက ဆိုရင်တော့ ကို Lလွန်းဝါ ကိုပူစူး ပြီးတော့ ကိုရဲလေး ကိုစိုင်းစိုင်း ကိုဘန်နီ တို့ပေါ့။ အစုံပါပဲ အကုန်လုံးကိုကြိုက်ပါတယ်။ ဟို .... ကျနော်က အားလုံးကို နားထောင်တော့ ကိုလေးဖြူ တို့လည်းကြိုက်တယ်။
မေး = အခု နောက်ဆုံး မေးခွန်း အနေနဲ့ ညီလေး စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေများကို ဘာများ ပြောချင်လဲ။
ဟုတ်ကဲ့ ... ကျနော်ပြောချင်တာက ကျနော့်သီချင်းတွေကို သည်းခံပြီးတော့ ကောင်းသည်ဖြစ်စေ မကောင်းသည်ဖြစ်စေ နားထောင်ပေးပါ ပြီးတော့ဝေဖန်ပေးပါ။ အကြံပေးပါ။ အပြစ်တွေ့ ရင်လည်း ပြောပါ ကျနော်ကလည်း သယ်ရင်းတို့ ပြောတဲ့ အတိုင်း ပြုပြင်ပြီးတော့ ကြိုးစားသွားပါ့မယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ ကျနော့ ..... သီချင်းတွေကို လူတိုင်း ခံစားနိုင်ပါစေ လို့ ကျနော်ကလည်း လူတိုင်းနီးပါး ခံစားနိုင်အောင် ကြိုးစား သွားပါ့မယ် လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ကျနော့ သူငယ်ချင်းများ အားလုံးကိုလည်း အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ အားလုံး လည်း ပျော်ရွင်ကြပါစေလို့ ကျနော် ထက်ယံက ဆုတောင်း ပေးလိုက် ပါတယ်။
မေး = ညီလေးဆီ ဆက်သွယ်ချင်တယ် ဆိုရင် ညီလေးရဲ့ လိပ်စာလေးက။
ဟုတ်ကဲ့ .... ကျနော့်ကို ဆက်သွယ်ချင်ရင်တော့ အခန်း(301) တိုက် (37) အောင်ဇေယျအိမ်ရာ တောင်ဒဂုံကို ဆက်သွယ်လို့ ရပါတယ်။ G mail ကတော့ ( htetyan.mm@gmail.com ) ပါ။ အကြံပေးချင်တာ ဝေဖန်ချက်များ ကို ဒီအကောင့်မှာ ပေးလို့ ရပါတယ် ခင်ဗျား။
အခုလို မေးသမျှကို အချိန်ပေး ဖြေကြားပေး ဝါသနာရှင် အဆိုတော် ညီလေး ထက်ယံ ကို ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။ အောင်မြင်သော အဆိုတော်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါစေ လို့လည်း ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ပါ။ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ ခင်ဗျား။ ကျနော့ ကို ခုလို အချိန်ကုန်ခံ အပင်ပန်းခံပြီး အင်တာဗျူး မေးပေးတဲ့ ဒီက အစ်ကို ကိုနေဇော်လင်း ကိုလည်း ကျွန်တော်က ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်။
စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေများ အခုလောက်ဆို ဝါသနာရှင် အဆိုတော် ထက်ယံ အကြောင်းတွေကို တော်တော် များများ သိကြရော့ပေါ့။ သူ သီဆိုထားတဲ့ သူရဲ့ သီချင်းလေးတွေ စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေများ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ နားထောင်ချင်တယ် ဒါမဟုတ် MP3 ရယူချင်တယ် ဆိုရင် အောက်မှာ နှစ်နေရာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
သူ့ ရဲ့ သီချင်းလေးတွေကို နားဆင်ခံစား ကြည့် ရအောင် ....
1 ; ယုံကြည်ပေးပါ။
2 ;ဘယ်သူ့ အတွက်လဲ။
3 ; Happy Birthday Honey
4 ; ကလေးဆိုးလေး။
5 ; My Lovely Girl
6 ; ငါ့အတွက်ရှိပါစေ
7 ; Baby Girl
8 ; မျှော်လင့်ဆဲ
10 ; အတူတူကဲလိုက် (သင်္ကြန်သီချင်း)
Mp3 သီချင်း ရယူချင်တယ် ဆိုရင် အောက်မှာ ယူနိုင်ပါတယ်။
၁ (Believe Me) HtEt Y@N.mp3 3.8 Mb
၂ (ဘယ်သူ့အတွက်လဲ) HtetYan & Little Boy(2).mp3 3.5 Mb
၃ (Happy Birthday Honey) HtEt Y@N & Mc Wai Linn.mp3 3.4 Mb
၄ ကလေးဆိုးလေး HtEt YaN.mp3 4.7 Mb
၅ My Lovely Girl - HtEt YaN...mp3 3.9 Mb
၆ ငါ့အတွက်ရှိပါ HtEt YaN.mp3 3.2 Mb
၇ မျှော်လင့်ဆဲ 3.2 Mb
၈ အတူတူကဲလိုက်(ထက်ယံ-ထက်အောင်လှိုင်) 4.6 Mb
၁၀ အချစ်ရူးလေး (ထက်ယံ-အာကာ)
ရှေ့အပတ်ထဲမှာလည်း ကောင်းနိုးရာရာ နာမည်ရ ဆိုက်တစ်ချို့ကို အင်တာဗျူး လုပ်ပြီး
အင်တာဗျူး အစီအစဉ်လေး အတွက် လိုအပ်သောကိစ္စများကို ပါဝင် ကူညီပေးသော ကိုဂျွန်ဖြိုး ( ဖူးစာရှင်လေးဆိုက် ) အား အထူုး ကျေး ဇုး တင် ရှိ ပါ သည်။